ဆံပင် cortisol နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများသောဘဝဖြစ်ရပ်များအားကိုကင်းသုံးစွဲသူများအားပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (၂၀၁၂) - Your Brain On Porn
ဆံပင် cortisol နှင့်အက်ကွဲကင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုဘဝဖြစ်ရပ်များနောက်ကြောင်းပြန်အကဲဖြတ် (2012)
နံနက် J ကိုမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှု။ 2012 နိုဝင်ဘာ; 38 (6): 535-8 ။ Doi: 10.3109 / 00952990.2012.694538 ။ EPub 2012 ဇူလိုင်3။
စိမျးလနျး-Oliveira R ကို1, Pezzi JC, Daruy-Filho L ကို, Viola TW, Francke ID ကို, Leite အဒေီ, Brietzke E ကို.
အချို့ကသက်သေအထောက်အထားပြောင်းလဲ hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) ကိုကင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်လည်ပတ်ဝင်ရိုးဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု၏ pathophysiology တစ်ကဏ္ဍမှပါစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ ကြိုတင်တစ် detoxification အစီအစဉ်ဝန်ခံချက်ဖို့3လအတွင်းအက်ကွဲကင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်အနုတ်လက္ခဏာဘဝဖြစ်ရပ်များနဲ့ Cortisol ဆံပင်ပြင်းအားမှထိတွေ့မှုများအကြားဆက်ဆံရေးအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရည်ရွယ်ပြီးဒီလေ့လာမှုက။
23 ကုသမှု-ရှာ၏တစ်ဦးစုစုပေါင်း crack ကိုကင်း-မှီခိုအမျိုးသမီးသော့ခတ်ကုသမှုစက်ရုံမှာအတွင်းလူနာကုသဝန်ခံချက်ပြီးနောက် 1 ရက်သတ္တပတ်ကဤလေ့လာမှုအတှကျရှေးခယျြခဲ့သညျ။ အဆိုပါ Paykel ဘဝကပွဲများစကေးဝန်ခံချက်မတိုင်မီ3လအတွင်းစိတ်ဖိစီးမှုဘဝဖြစ်ရပ်များ၏ဖြစ်ပျက်မှုတိုင်းတာ။ ဆံပင် cortisol အာရုံစူးစိုက်မှု, ဤသုံးပါးသည်ယခင်လအတွင်းတိုင်းတာခဲ့သည်။
နှင့် 90 ရက်ပေါင်း (r =; အဆိုပါတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆက်စပ်မှု, ထိန်းချုပ်မှု variable ကိုအဖြစ်မှီခို၏ပြင်းထန်မှုကိုအသုံးပြုပြီး, ဆံပင် cortisol အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အပျက်သဘောဘဝဖြစ်ရပ်များထိတွေ့ 56 ကာလ၏နံပါတ် (p = .007, r = .30) အကြားအပြုသဘောအသင်းအဖွဲ့ရှိကွောငျးဖျောပွထားပါ .42; p = .048) သည်ဆေးရုံတွင်ဝန်ခံချက်မှကြိုတင်။ one-way ANOVA ဆံပင် cortisol ပမာဏနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုဝန်သိသိသာသာကြိုတင်ဆေးရုံတင်ကုသရန်မှ3လအတွင်းတိုးမြှင့်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
ဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုရေရှည်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာ cortisol လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်အက်ကွဲကင်းမှီခိုမှုအတွက်အတွင်းလူနာကုသမှုကိုလက်ခံရရှိအမျိုးသမီးအစီရင်ခံစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များများ၏အရေအတွက်အတိုင်းအတာအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်အသင်းအဖွဲ့လည်းမရှိကဖော်ပြသည်။ ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှုစိတ်ဖိစီးမှုဝန်ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ quantified နှင့် noninvasively အကဲဖြတ်နိုင်ပါတယ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
ဒီလေ့လာမှုကအက်ကွဲကင်း-မှီခိုသည်အသုံးပြုသူများအကြားဆံပင် cortisol ပြင်းအားကို အသုံးပြု. လည်ပတ် HPA ဝင်ရိုးစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပစ္စည်းဥစ္စာချိုးဖောက်စိတ်ဖိစီးမှုဝန်ကိုအကဲဖြတ်နိုင်ရန်အလားအလာမဟာဗျူဟာဖြစ်ပါတယ်။